Ụzọ ịzụrụ mmasị YouTube nwere ike inyere ọwa gị aka ịga nke ọma
Ọganihu nke ọwa YouTube gị dabere n'ọtụtụ metrik dị ka ndị debanyere aha, nlele na mmasị. N'ime edemede a, anyị ga-achọ ịkpọrọ gị site na mkpa ịzụrụ mmasị YouTube. Oge agaala mgbe ndị na-emepụta ọdịnaya ga-echere ihe mmasị organic. Ugbu a, ọtụtụ ndị YouTube na-ahọrọ ịzụta mmasị YouTube maka ịhụ na ọwa ha na-eto ngwa ngwa.
Gụkwuo ka ịmata ka ịzụrụ mmasị YouTube nwere ike isi gbanwee ọwa gị ngwa ngwa, yana ọnyà ndị nwere ike ị nweta mgbe ị na-azụta mmasị maka vidiyo YouTube gị. Yabụ, n'egbughị oge ọzọ, ka anyị nweta akụkọ a nke ọma wee malite n'ezie.
Ịzụta mmasị vs organic ibu
Na mbụ, mgbe ọ nweghị ihe dị ka ịzụrụ mmasị YouTube na / ma ọ bụ ndị debanyere aha, ọtụtụ YouTubers na-adabere na uto organic iji gaa n'ihu n'elu ikpo okwu. Agbanyeghị, ụbọchị ndị ahụ agaala. Taa, ndị YouTubers ndị na-echere ogologo oge ka ọwa ha na-eto eto na-enwekarị mmasị na YouTubers ndị na-adịghị atụ egwu itinye nnukwu ego na ọwa ha.
Mba, anyị anaghị emegide uto organic. Otú ọ dị, nke bụ́ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ihe mgbochi na uto organic ị kwesịrị ịma. Gụkwuo ka ịmata ihe ha bụ:
Uto nke organic na-ewe oge: Nnukwu mwepu nke uto organic na YouTube bụ na ọ na-ewe ogologo oge ịmị mkpụrụ ọ bụla. Ọtụtụ ndị YouTubers na-aga nke ọma ugbu a bụ ndị dabere na uto organic ga-anọrịrị ọtụtụ afọ na-akwalite nka imepụta na idezi ha iji ruo ebe ha nọ ugbu a. Ndị YouTube ọhụrụ nọ na mwepu ka ukwuu n'ihi asọmpi na-abawanye na ikpo okwu. N'oge a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ niche ọ bụla nke imepụta ọdịnaya n'elu ikpo okwu jupụtara na ndị okike na-agba ọsọ maka oghere, ama ama na akụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị dabere naanị na uto organic iji buru ọwa gị n'ihu, ị ga-echere ogologo oge tupu ịhụ ụdị ọ bụla nke ịga nke ọma.
Ị ga-arụ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ karịa ịmepụta: Ọ bụrụ na ị bụ onye okike ọdịnaya nwere nkà ma chọọ igosi nkà na nkà gị n'ihu ndị na-ege ntị na YouTube, ị ga-abanye na nsogbu n'oge na-adịghị. Nsogbu bụ na uto organic agaghị eme n'onwe ya - ị ga-etinye mgbalị dị ukwuu iji mee ya. Site na ịgba ọsọ mgbasa ozi mgbasa ozi na nyiwe mgbasa ozi ọha na eze dị iche iche ruo n'iru ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya - ọ nwere ike ịba nnukwu ngwa ngwa. Na njedebe nke ụbọchị, ọ ga-abụ na ị ga-ahụ onwe gị obere oge maka ime ihe ị hụrụ n'anya - ịmepụta ọdịnaya. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta oge zuru oke iji mepụta ọdịnaya gị, ọ ga-abụ na ị ga-ejedebe na nsonaazụ dị ala nke ị na-agaghị eji mpako na-ekerịta ụwa.
Ị ga-enwe nkụda mmụọ wee daa mbà: Nke a emela ọtụtụ ndị YouTube, na enwere ohere na nke a ga-emekwa gị. Ka uto organic na-ewe oge buru ibu, ị nwere ike ịmalite na-eche ihe kpatara ịmalite ịmepụta ọdịnaya na YouTube na mbụ. Isi ihe bụ na n'agbanyeghị na ị na-anụ ọkụ n'obi mgbe ịmalite njem YouTube gị, oge ga-abịa mgbe ị ga-achọ ụdị ụgwọ ọrụ. Ọ nweghị ihe na-ekwekọghị n'okike na nke a. Ọ bụ naanị ọdịdị mmadụ ịchọ ụdị ụgwọ ọrụ mgbe etinyechara ọtụtụ ọrụ n'ime ihe. Agbanyeghị, site na uto organic, ọ nweghị ịkọ mgbe ụgwọ ọrụ ga-abịa. O yikarịrị ka ị ga-enwe nkụda mmụọ, nke na-abụkarị ihe na-eme mgbe ọ nweghị ihe ga-egosi maka mbọ gị.
Agbanyeghị, mgbe ịzụrụ mmasị, ị na-enye ọwa gị na vidiyo ya nkwalite ha chọrọ iji mee nke ọma na ikpo okwu mgbasa ozi vidiyo kachasị n'ụwa.
Uru dị n'ịzụta mmasị YouTube
Ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka mmasị YouTube maka vidiyo ọwa gị, ị ga-enweta uru dị iche iche. Iji mata ihe ha bụ, gụọ na:
Vidiyo gị ga-enwe ohere ka ukwuu nke ịwa nje: Onye ọ bụla kere ọdịnaya na-arọ nrọ opekata mpe otu vidiyo na-aga viral. A sị ka e kwuwe, ịga nje virus bụ otu n'ime ụzọ kacha mma isi nweta ihe ịga nke ọma n'otu abalị. Ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya n'oge gara aga akwadola ọnọdụ ha na YouTube site na ịnyagharị na ọganiihu nke vidiyo nje ha. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe na-enyere vidiyo aka ka ọ pụta ìhè, ka anyị gwa gị na ọ na-amasị gị ịrụ nnukwu ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ka vidiyo viral na-enweta ume, ọ na-amalite ịchịkọta ọtụtụ narị na puku kwuru puku echiche na mmasị. Mgbe vidiyo ahụ malitere ịpụta na ntanetịime nke ndị ọrụ YouTube na-abụghị ndị na-ege gị ntị, ndị ọrụ na-ebu ụzọ lelee ọnụọgụ nlele na mmasị. Mgbe ha hụrụ na ọnụọgụ abụọ ahụ dị oke elu, ha na-elekarị vidiyo, nke na-agbakwụnye na echiche. Yabụ, ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka mmasị, enwere ohere dị ukwuu na vidiyo gị ga-aga viral.
Ọkwa vidiyo gị ga-adị elu: Maka ihe ịga nke ọma ogologo oge na YouTube, ịchọrọ ka vidiyo gị bụrụ ọkwa dị elu na ibe nsonaazụ ọchụchọ YouTube. Na-emekarị, algọridim YouTube na-atụle ọtụtụ ihe tupu ekenye otu ọkwa na vidiyo na ibe nsonaazụ ọchụchọ. Dị ka ọmụmaatụ, Search Engine Optimization (SEO) nke vidiyo bụ ihe dị mkpa. Ihe ọzọ dị mkpa bụ ọnụ ọgụgụ njikọ aka onye ọrụ, nke gụnyere ọnụọgụ nlele, mmasị na ihe na-adịghị amasị ya. Yabụ, ọnụ ọgụgụ nke mmasị ga-adị elu n'ofe vidiyo gị niile, n'ihi na ọ ga-eme ka ha niile bụrụ ndị a họọrọ nke ọma site na algọridim YouTube. Ọ bụrụ na ị dabere na uto organic, ọ nwere ike were vidiyo gị ogologo oge iji nweta ụdị ọnụ ọgụgụ ntinye aka nke ndị ọrụ ha kwesịrị ịkwado nke ọma.
Ọ ga-abụ ihe akaebe maka nkwado mmekọrịta gị: Ọ na-adị mma ka a masịrị gị - ma na ndụ n'ezie ma na ụwa mebere. Ma enwere ihe gbasara ịbụ onye na-amasị gị - ka ọ na-amasị gị karị, ka ndị ọzọ na-amasị gị karị. Nke a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị echiche nke nkwado mmadụ na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-egwu egwu na-ewu ewu na-enwekarị mmasị karịa n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-amasị ha. N'otu aka ahụ, mgbe ị nwere ọtụtụ mmasị n'ofe vidiyo gị, ha ga-abụ ihe akaebe na ndị na-ekiri gị kwadoro gị. N'ikpeazụ, nkwenye a ga-adọtakwu ndị na-ekiri ọdịnaya gị, na-ekwe nkwa na ọwa gị na-eto ngwa ngwa na ọganihu ogologo oge.
Algọridim YouTube ga-akwalite ọdịnaya gị karịa: Dị ka anyị kwuru na mbụ, algọridim YouTube na-atụle ihe dị iche iche maka ogo vidiyo. A na-atụlekwa otu ihe ahụ site na algọridim mgbe ọ na-abịa n'ịkwalite ọdịnaya nye ndị na-ekiri ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, vidiyo nwere mmasị na ya nwere ohere dị elu nke ibuli ya site na algọridim YouTube nye ndị na-ege ntị ọhụrụ karịa vidiyo nwere naanị ntakịrị mmasị. Yabụ, ọ bụrụ na ịzụrụ YouTube na-amasị gị ịkwalite stats njikọ aka onye ọrụ, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta aka enyemaka site na YouTube n'ihe gbasara ịkwalite vidiyo ahụ nye ndị na-ege ntị ọhụrụ.
Kedu ihe ị ga-eme maka mmasị na-abụghị ịzụrụ ha?
Ọ bụ ezie na nhọrọ ịzụrụ ihe na-amasị YouTube nwere ike ịrụ ọrụ ebube maka vidiyo gị na ọwa gị n'ikpeazụ, ọ dị mkpa na ị na-etinyekwa mgbalị iji nweta mmasị organic. E kwuwerị, ị nweghị ike ịzụta ụzọ gị maka ịbụ onye a ma ama na otuto na YouTube. Yabụ, na ngalaba a, anyị ga-enye ụfọdụ ndụmọdụ kacha mma maka ịkpata mmasị YouTube n'ụzọ anụ ahụ.
Gosi ọwa YouTube gị na webụsaịtị gị: Ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ raara onwe ya nye nke na-enweta okporo ụzọ na-agbanwe agbanwe, ị kwesịrị ijide n'aka na ị gụnyere njikọ na ọwa YouTube gị na vidiyo ya na weebụsaịtị. Nke a ga-eme ka ndị na-ege gị ntị chọpụta banyere YouTubing gị ọ bụghị naanị site na YouTube kamakwa site na webụsaịtị gọọmentị gị. N'agbanyeghị YouTube bụ ikpo okwu nke ndị mmadụ gburugburu ụwa na-eji ụbọchị a, a ka nwere ọtụtụ ndị na-adịghị eji ikpo okwu eme ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndị nwere ezi mmasị na ihe ị ga-enye iji mara na ị nwere profaịlụ YouTube, ha nwere ike ịmasị ịlele vidiyo gị. Nke a ga-ebute ọtụtụ nlele maka vidiyo gị na YouTube, yana n'ezie, masịrị gị.
Mepụta ndepụta ọkpụkpọ maka ndị na-ekiri gị: Ọtụtụ ndị na-ekiri na YouTube na-enwe mmasị ikiri listi ọkpụkpọ, ya bụ, usoro vidiyo na-emetụta otu okwu ma ọ bụ isiokwu. Ịga na listi ọkpụkpọ na-enye ndị na-ekiri ozi zuru oke na isiokwu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị YouTuber ọhụrụ aghọtaghị mkpa ọ dị ịmepụta listi ọkpụkpọ, n'ihi ya, ha na-ejedebe na ọwa na-enweghị ndepụta ọkpụkpọ ọ bụla. Anyị na-akwado gị ka ị ghara imehie ihe ahụ. Kama, mepụta ndepụta ọkpụkpọ sitere na nsonaazụ maka ndị na-ekiri ga-enye ha azịza nke ọma na isiokwu ọ bụla ha chọrọ ozi na ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na vidiyo gị na-enye ihe ọmụma ma na-adọrọ mmasị, na ha ga-enweta ọtụtụ mmasị.
Mee ihe inye onyinye: N'afọ ndị na-adịbeghị anya, inye onyinye aghọwo otu n'ime ụzọ kachasị ewu ewu nke YouTubers na-eji enweta nkwado maka ọwa ha. Otu a ka o si arụ ọrụ - nye ndị mmadụ ohere iji nweta ihe nrite site na isonye na asọmpi inye onyinye na ọwa gị. Enwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi nye onyinye. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị na-agba ndị na-ekiri ha ume ka ha zaa ajụjụ na vidio ụfọdụ ka ha ruo eruo inye onyinye ahụ. Agbanyeghị, ebe anyị na-elekwasị anya naanị na mmasị na edemede a, ị nwekwara ike ịrịọ ndị na-ekiri ka ha hapụ mmasị ka e were ha na ha tozuru oke maka inye onyinye ahụ. N'ihe gbasara ịba ụba mmasị organically, ọ nweghị ihe nwere ike ịrụ ọrụ ahụ ngwa ngwa dị ka inye onyinye nwere ike. Yabụ, ọ bụrụ na ịmebeghị onyinye mbụ, ọ ruru oge ịmere otu.
Lezienụ anya na SEO: Search Engine Optimization (SEO) bụ ihe dị oke mkpa mana a na-elegharakarị YouTube anya, ọkachasị ma a bịa na YouTubers ọhụrụ. Site na aha vidiyo gị ruo na nkọwa - otu esi eji isi okwu n'ime ha ga-ekpebi etu ndị na-ege gị ntị ga-esi chọta gị na YouTube. Dịka ọmụmaatụ, chee echiche maka mkpụrụokwu ndị na-ekiri ga-eji chọọ otu vidiyo. Ị nwere ike were ngwaọrụ nyocha isiokwu dị iche iche iji chọpụta mkpụrụokwu ndị ọrụ nwere ike iji. Ikwesiri ileba anya maka isi okwu nke nwere otutu asọmpi. A naghị atụ aro mkpụrụokwu na nkebiokwu dị oke asọmpi maka ojiji ma ọ bụrụ na ị bụ YouTuber ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịmaghị SEO, ị nwekwara ike were ụlọ ọrụ SEO ọkachamara were lekọta gị ọdịnaya edere.
Jiri mkpado vidiyo maka nhazi ọdịnaya kwesịrị ekwesị: YouTubers were mkpado vidiyo n'otu oge. Agbanyeghị, n'ihi ihe ụfọdụ, YouTubers nke oge a dị ka anaghị eji njirimara ahụ eme ihe. Ọ dị mma, n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ na-eme, ka anyị gwa gị na iji mkpado vidiyo n'ụzọ ziri ezi nwere ike inyere algọridim YouTube aka ịhazi ọdịnaya gị nke ọma. Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ileba anya nke ọma ihe ndị na-emepụta ọdịnaya kachasị na niche gị na-eme. Nke a ga-enyere gị aka ịchọpụta mkpado ndị ị ga-eji. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na ị na-eji mkpado ziri ezi n'ofe vidiyo gị niile, ndị na-ege gị ntị ga-enwe ike ịhụ vidiyo gị na YouTube n'ụzọ dị mfe karị. Nke a nwekwara ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nlele n'ofe vidiyo gị niile, yana ọnụọgụ mmasị.
Tinye obere mgbalị n'imepụta obere mkpịsị aka na-adọrọ adọrọ: thumbnail vidiyo gị bụ ihe mbụ ga-adọta mmasị nke ndị na-ekiri gị. Yabụ, n'ezie, ị ga-achọ ka vidiyo vidiyo gị niile na-akpali anya n'eleghị anya nke ukwuu. Onyonyo ị na-eji maka obere mkpịsị aka gị kwesịrị ịdị oke mma, yana mkpụrụedemede. Mgbe a bịara na mkpụrụedemede, na-aga mgbe niile maka nchikota ọdịdị na ịgụ ihe. Ọtụtụ ndị YouTube akwụla ọnụ ahịa maka iji mkpụrụedemede ndị mara mma mana anaghị agụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme otu ihe ahụ, a ga-emeri ebumnuche ịmepụta thumbnail. Ọzọkwa, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị YouTube amalitela iji ihu ha na thumbnails ha. Nke a arụwo ọrụ ebube n'ihe gbasara iwulite mmekọrịta mmetụta uche na nke mmadụ n'etiti ndị na-emepụta ọdịnaya na ndị na-ege ha ntị.
Mepụta ndepụta okwu vidiyo gị maka iru eru ka ukwuu: Ị nwere ike na-asụ Bekee gafee niile gị videos, ma ị ga-echeta otu ihe – English ekwughị otu ụzọ n'ebe nile. Dịka ọmụmaatụ, lee anya ka esi asụ Bekee dị iche na USA na UK. Site na ọkọwa okwu ruo na ụda olu ruo na nkebiokwu izugbe ejiri - ọ dị iche. Yabụ, naanị n'ihi na ị na-eji Bekee apụtaghị na ụwa niile ga-aghọta okwu gị. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ugbu a imepụta ndepụta okwu maka vidiyo niile ị na-ebipụta. N'ezie, ị nwere ike ịdị umengwụ wee soro onye na-emepụta okwu akpaka nke Google, nke na-arụ ọrụ site na ngwanrọ njirimara okwu Google. Agbanyeghị, n'agbanyeghị nkwa na ikike ya, njirimara ahụ ka aghọtachaghị ụda olu dị iche iche. N'ihi ya, ọ na-egosipụtakarị nsonaazụ na-ezighi ezi.
Imekọ ọnụ iji nweta ndị ọhụrụ: Niche ọ bụla nke imepụta ọdịnaya na YouTube na-ejupụta n'ọnụ na ndị okike dị elu. N'ezie, onye ọ bụla maara banyere YouTubers kachasị elu nke setịpụrụ ụkpụrụ maka niche vidiyo ọ bụla. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị okike na-anọ n'okpuru radar nye ụfọdụ ndị na-ege ntị. Ụzọ kachasị mma isi mee ka ndị na-ege ntị mara ịdị adị gị na YouTube bụ imekọ ihe ọnụ na aha YouTubing ndị ọzọ na niche gị bụ ndị nọ n'ọkwa yiri nke gị. N'ụzọ dị otu a, gị na ndị YouTube ndị ọzọ nọ na niche gị nwere ike inyere onwe gị na ibe gị aka ịbawanye ọkwa YouTube site na mbọ imekọ ihe ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-eche ka gị na ndị ọgbọ gị YouTubing ga-esi emekọrịta, ị nwere ike iji ịntanetị gụọ ọtụtụ akụkọ na posts ndị na-atụle echiche imekọ ihe ọnụ.
Jikwaa usoro nje virus: Usoro nje virus dị ka Ice Bucket Challenge na-enye ndị na-emepụta ọdịnaya ọtụtụ ohere itinye ntụgharị ha na ya ma mee ka ọ buru ibu n'onwe ha. Yabụ, nọrọ na nche mgbe niile maka usoro nje virus. Ịgba aghara nke omume ahụ ga-agba ndị na-ekiri ume na-akpaghị aka ka ha lelee ihe ị na-eme na ya. Ọ bụrụ na ndị na-ekiri ole na ole mbụ nwere mmasị na ihe ha na-ahụ, ọ nweghị ihe kpatara na vidiyo gị enweghị ike nwetakwa nje. Usoro ndị dị otú ahụ dị mma ma a bịa n'ịkwata ọtụtụ mmasị ngwa ngwa. Yabụ, ị ga-eme ihe niile ị nwere ike ime ka ị nweta oke n'ime ha mgbe ha na-abịa.
Jiri kaadị YouTube na ihuenyo njedebe: Ọ bụrụ na onye nkiri nwere mmasị na otu vidiyo gị, enwere ihe kpatara na otu onye na-ekiri ga-amasị ọdịnaya gị karịa. Agbanyeghị, ozugbo vidiyo ahụ mechara, ị nwere ike ịdabere na onye na-ekiri ya ka ọ chọọ ọtụtụ ọdịnaya gị n'enweghị ntụnye ọ bụla sitere na YouTube? Azịza ziri ezi bụ mba. Cheta, YouTube nwere njirimara akpaaka, nke agbanyere na ndabara. Nke a bụ ihe na-eme mgbe agbanyere akpaaka - ozugbo vidiyo gị gwụchara, vidiyo ọzọ ga-amalite ịkpọ ma ezumike nkeji ise gachara. O yikarịrị, vidiyo ga-esochi agaghị abụ nke ị bipụtara. Yabụ, n'ime obere oge, uche onye na-ekiri ga-esi na ọdịnaya gị pụọ gaa na nke onye ọzọ. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado iji kaadị YouTube na ihuenyo njedebe, ebe ha ga-enyere aka mee ka ndị na-ekiri ihe mara maka vidiyo gị karịa.
Ịzụta mmasị YouTube: ọ dị mma?
Ị nwere ike ịdị gị ka ọ bụ mpụ ịzụrụ mmasị dabere na akụkọ na-enweghị atụ na ịntanetị. Agbanyeghị, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ nweghị ihe na-adịghị ize ndụ banyere ịzụrụ mmasị maka vidiyo YouTube gị. Naanị ọnọdụ ebe nchekwa nwere ike bụrụ nsogbu bụ ma ọ bụrụ na ịzụrụ mmasị n'ụdị bots, otu ahụ na-agakwa maka ndị debanyere aha na bot. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-azụ ezigbo mmasị, nlele na ndị debanyere aha, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị. Ọtụtụ ndị YouTubers ụbọchị ndị a na-etinye ego na mmasị YouTube, ndị debanyere aha, echiche na nkwupụta - gịnị kpatara na ha agaghị eme?
YouTube, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, etinyela nnukwu nrụgide n'ahụ ndị na-emepụta ọdịnaya ka ha bipụta ọdịnaya mgbe niile. N'ọtụtụ niches, a manyere ndị okike ka ha bipụta vidiyo dị ka vidiyo kwa ụbọchị. Nke a bụ ọrụ siri ike, nke chọrọ nnukwu mbọ, n'ihi na idezi vidiyo bụ usoro na-ewe oge. N'okpuru nrụgide dị otú ahụ, ọtụtụ ndị YouTube atụgharịala ịzụta mmasị na ndị debanyere aha n'ihi na ọ na-azọpụta ha n'ịchụso ahịa na ọrụ nkwado. N'ihi ezigbo mmasị na ndị debanyere aha, ha nwere ike ịkwalite ọnụọgụ ọwa ha na-ewepụghị ihe ọ bụla na mmepụta ihe ha.
Ya mere, ihe niile, enweghị nchekasị ma a bịa n'ịzụta mmasị YouTube. Agbanyeghị, dị ka anyị kwuru na mbụ, ị ga-ewepụrịrị ngwugwu na-enye bots. Ndị ọrụ na-enyekarị ngwugwu ndị a na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, mana ha nwere ike nweta nsonaazụ ọjọọ na ọwa gị, dịka:
Ndị nhazi YouTube na-egosi ọkọlọtọ: Ruo afọ ole na ole gara aga, algọridim YouTube nwere ọtụtụ oghere, nke nyere ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya ohere pụọ na ịzụrụ ndị debanyere aha, echiche, mmasị na nkọwa n'ụdị bots. Agbanyeghị, oge agbanweela, ọtụtụ YouTubers nwere profaịlụ achọpụtala onwe ha na njedebe nke omume siri ike YouTube megide ndị na-azụ ahịa bot. Ụdị ntaramahụhụ kachasị dị nro nke ị nwere ike ịtụ anya ma ọ bụrụ na ịzụrụ ndị debanyere aha bot bụ ndị nhazi YouTube na-egosi ọwa gị. Nke a yikarịrị ka ọ ga-ebute shadowban, ya bụ, a ga-ahapụ ọwa gị ka ọ rụọ ọrụ na YouTube. Agbanyeghị, agaghị akwalite ọdịnaya ya ma ọ bụ tinye ya na ibe nsonaazụ ọchụchọ YouTube.
Onyonyo na-adịghị mma nke ọwa gị n'etiti ndị na-ekiri organic na ndị debanyere aha: Ndị na-ekiri organic na ndị debanyere aha gị dị adị agaghị enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ọtụtụ ndị debanyere aha gị abụghị ezigbo mmadụ. Nke kachasị njọ bụ (ọ bụrụ na ịzụrụ ndị debanyere aha bot) na ọ dị mfe ịkọ mgbe ọwa nwere ndị debanyere aha bot. Dịka ọmụmaatụ, ndị debanyere aha bot gị nwere ike mejupụta ngalaba nkọwa vidiyo gị na nkọwa adịghị mkpa na enweghị isi. Ọ bụ ezie na otu okwu ma ọ bụ abụọ agaghị eme nnukwu mmebi, ọ bụrụ na enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkwupụta enweghị isi, subs organic gị ga-achọpụta. Na-emekarị, ngalaba nkọwa vidiyo YouTube bụ ebe ndị na-ekiri na-amasị ịme mkparịta ụka. Agbanyeghị, mgbe ndenye aha organic gị chọpụtara na ọtụtụ n'ime nkwupụta ndị a sitere na bot, ha nwere ike ịwepụ aha na ọwa gị nke ọma.
Nkwụsị akaụntụ: Yabụ na ndị na-ahụ maka YouTube gosipụtara gị otu ugboro, mana ị gara n'ihu na-azụta mmasị YouTube n'ụdị bots. N'ọnọdụ dị otú ahụ, YouTube nwere ike ịmanye ime ihe siri ike megide ọwa gị, nke na-abụkarị nkwụsị nke ọwa YouTube gị. Ọ bụrụ na nke a emee, ọ ga-apụta nkwusioru ọwa gị na-adịgide adịgide, nke na-agaghị ekwe omume ịmegharị. N'ọnọdụ a, ị ga-amalite ọwa ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nọrọla ọnwa na afọ iji wulite ọwa YouTube gị site na ọkọ, nke a ga-abụ igbu egbu egbu.
Yabụ, ọ bụrụhaala na ị na-ewepụ ndị debanyere aha bot, mmasị, echiche na nkọwa, enweghị nsogbu ọ bụla. Naanị ihe ị ga-echeta ma ọ bụrụ na ịzụrụ mmasị YouTube bụ na ị kwesịrị ịzụrụ ezigbo mmasị naanị. Obi dị m ụtọ na e nwere ọrụ dị iche iche na-enye ndị YouTube ohere ịzụta ezigbo ndị debanyere aha YouTube, mmasị na ndị ọzọ.
Mmechi - ị kwesịrị ịzụrụ mmasị YouTube ma ọ bụ na ị gaghị azụta?
N'ihe gbasara ịzụrụ mmasị YouTube, anyị ekpuchila ya niile n'isiokwu a. Anyị ekenyekwala gị ụfọdụ ndụmọdụ kacha mma maka ịbawanye mmasị YouTube n'ụzọ nkịtị. Yabụ, ị nwere ike na-ajụ ma ị kwesịrị ma ọ bụ na i kwesịghị ịzụrụ mmasị.
Ọ dị mma, ndụmọdụ anyị ga-abụ ịga maka ya wee zụta ezigbo mmasị YouTube na ndị debanyere aha.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye mepụtara ọdịnaya ọhụrụ na YouTube, ọ nwere ike isiri gị ike ịnweta echiche organic, ndị debanyere aha na mmasị na ọkwa mbụ. Afọ ole na ole gara aga, YouTubers ọhụrụ ga-echere ọnwa tupu ha ahụ ọwa ha na-eme ọganihu ọ bụla dị ịrịba ama n'ihu. Ugbu a, oge nchere ahụ abawanyela ruo otu afọ ma ọ bụ ikekwe ọbụna afọ ole na ole. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-etinye obi gị na mkpụrụ obi gị ịmepụta vidiyo YouTube, ị gaghị achọ ichere ogologo oge ahụ tupu ọwa gị amalite ime nke ọma, ị ga-?
Ya mere anyị na-adụ ọdụ ka ịzụrụ mmasị ma nye ọwa YouTube gị ntọala siri ike iji wulite na ya. Ozugbo ọwa gị nwere ọnụọgụ dị mma iji kwado ya, ọ ga-enweta echiche organic, mmasị na ndị debanyere aha. Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ YouTube ọ bụla na-achọ ịhụ ọnụọgụ ndị debanyere aha nke ọwa yana ọnụọgụ nlele na mmasị. Ọ bụ naanị mgbe ọnụọgụ masịrị onye ọrụ ka onye ọrụ na-aga n'ihu ịdenye aha na ọwa.
Ee, enweghị ike inwe obi abụọ banyere ya - ọdịnaya gị dị mkpa karịa ọnụọgụgụ. Ma chee echiche banyere ya? Ọ ga-amasị gị itinye ihe niile n'ime ọdịnaya gị ma ọ nweghị ihe ị ga-egosi ya? Ma ọ bụ ọ ga-amasị gị mbọ gị ịtụgharị asụsụ ka ọ bụrụ ọnụọgụgụ n'ezie? Anyị ji n'aka na azịza gị ga-adabara ajụjụ ikpeazụ a. Yabụ, gịnị kpatara na-atụfu oge? Zụta mmasị YouTube site na isi iyi a ma ama dika SoNuker, wee hụ ọwa gị ka ọ na-aga otu ọkwa ma ọ bụ abụọ dị elu na nnukwu egwuregwu YouTube. Kpọtụrụ ndị ọkachamara anyị taa.